हेमा र पुण्यको सम्बन्धमा उठ्यो प्रश्न, हेमाको घाउ आइरनले डा’मेर बनाइयो भन्नेहरूका लागि आयो यस्तो चेतावनी ! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > हेमा र पुण्यको सम्बन्धमा उठ्यो प्रश्न, हेमाको घाउ आइरनले डा’मेर बनाइयो भन्नेहरूका लागि आयो यस्तो चेतावनी ! (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । भैसीपाटे स्थित अवकास प्राप्त जर्नेल हेम खत्रीको घर घे र्न गएको बेलामा प्रहरीले ला ठी चा र्ज गरि घाइते बनाएकी हेमा श्रेष्ठ अहिले स्वास्थ्य जाँच पछि घर फर्केकी छन् । प्रहरी हि रा स तमा केही बेर बसेर उनी अस्पताल पुगेकी छन् । प्रहरी हि रा सत वाट छुटेर घर गएपछि घाउ निकै दु खेपछि उनले आफुलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने पुण्य गौतमले जन आ न्दोल नको घाइते नरनाथ गौतमसंग मिलेर अस्पताल लगेको बताएका छन् ।
पुण्य र हेमा बीच सम्बन्ध विग्रेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा कुरा आएपछि उनले त्यसको पनि जवाफ दिएका छन् । जवाफमा उनले भने, म पनि पारिवारिक मानिस हो, परिवारलाई पनि समय दिन पर्यो । भाई टिका लगाउने दाजु र बहिनीको सम्बन्ध कहिले पनि विग्रन्न । उनले आफ्नो दिदी बहिनी धेरै भएको र त्यसमा हेमा पनि थपिएको बताए ।
उनले हेमालाई अस्पताल लैजाँदा लोकवहादुर टण्डनले टेक्सी भाडा दिएपछि अस्पताल लगिएको बताए । हेमाले पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरुको खण्डन गरेकी छन् । उनले भनिन्, सम्बन्ध विग्रिएको भए मैले अ प्ठेरो पर्दा पुण्य दाईलाई नै बोलाउने थिइन् । उहाँले नै मलाई अप्ठेरो परेको बेलामा सहयोग गर्नु भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा देखाइएको घाउ पनि बनावटी र आइरनले डा मेको भनेर टिप्पणी गर्नेहरु प्रति नरनाथ निकै आ क्रो शित भए । उनले भने, हामी पहाडमा काम गरेर खाएको मानिस हो, घाउ आफैले बनाएको हो वा प्रहरीले ला ठी हा नेर बनाएको हो भन्ने कुराको प्रमाण हामीले भन्ने होइन डाक्टरको रिपोर्टले बोल्छ ।
उनले त्यसो भन्नेहरुलाई आएर हेमालाई लगेर अस्पताल लैजान र आफै जाँच गर्न चे ता वनी दिएका छन् । हेमा घाइते भएका कारण उनका दुई साना सन्तान पनि बिचल्लीमा परेको भन्दै उनीहरुले हेमालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले घाउ आफै बनाएको भन्नेलाई आफुले टेकेको वैशाखीले हा न्न मन लागेको पनि बताए । उनले आइजिपीलाई पनि आग्रह गर्दै भने, महिला माथि भएको यस्तो घ ट नालाई ग म्भिर रुपमा छानविन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले नचाहिँदो अपमान गर्नेले महिलालाई अन्याय गरेको बताए । उनले हेम खत्री सल्लाहमा नआएका कारण यो सबै घ ट ना भएको बताए । उनले हेमले एक महिला माला शाहलाई अन्याय गरेका कारण हेमा पनि न्याय दिन सडकमा आएको बताए । त्यसरी महिलाका पक्षमा लाग्नेहरुलाई प्रहरीले थप अन्याय गरेको बताए ।
रोबर्टले गर्यो भबिष्यवाणी शृंखला खतिवडा मिस वल्ड २०१८ पक्का (भिडियो)